Sida looga saaro astaamaha bar menu menu-ka | Waxaan ka socdaa mac
Mar labaad waxaan kaala hadli doonaa arrimo ku saabsan arrin aad u macquul ah oo in badan oo idinka mid ah uusan aqoon u lahayn sida loo sameeyo. Kuwani waa astaamaha ka muuqda midigta kore ee desktop-ka. Haddii aad ku cusub tahay ama ku cusub tahay macOS Sierra, waa inaad ogaataa in Finder-ku uu leeyahay bar menu oo ku taal dusha sare ee miiska kaas oo ay ku yaalliin astaamo ay ka mid yihiin WiFi, maqal, muuqaal-hawleed, ogeysiisyo, astaamaha codsiyada qaarkood lagu rakibay. iyo macOS-ka cusub ee loo yaqaan 'Siri icon'.
Waa hagaag, astaamahan ayaa ah sababta aan u go'aansaday inaan ka hadlo tan maanta. Ka dib markii lagu rakibo macOS-ka cusub ee loo yaqaan 'macOS Sierra' saaxiibkiis Mac iyo sharrax warkaaga sareIsaga laftiisu wuxuu ii sheegayaa inuusan ka rabin Siri wax ku saabsan barnaamijkiisa Mac. Wuxuu rabay inuu joojiyo inuu arko labadaba astaanta Dock iyo ta ku taal baarka sare ee Finder-ka. Horeba lamaanaheena Jordi Jiménez ayaa maanta nala hadlay ku saabsan sida looga saaro astaanta Siri, laakiin hadda waxaan u buuxinayaa macluumaadkaas xoogaa, falanqaynta falalka barnaamijyada kale.
Imaatinka macOS Sierra, Siri wuxuu ku yimid Mac-ka wixii dadka qaarna ay ahaayeen imaatin dheer oo la sugayay, kuwa kalena waa aalad kale oo aysan rabin inay adeegsadaan hadda. Sidaad arki karto, markaad rakibto macOS Sierra nidaamka ayaa ku dhigaya, dabcan, astaan ​​Siri labadaba Dock iyo baarka sare ee Finder. Isla sidaas oo kale ayaa dhacda markaad rakibto codsiyada sida CleanMyMac, Boom, ama si kooban, barnaamijyada ay soo-saareyaashoodu go'aansadeen in astaamuhu ka muuqdaan baalka menu Finder.
Hagaag, sidaan filayo, saaxiibkay ma doonayo astaamahaas kumbuyuutarka ee uu ii sheegayo inuu ogyahay in laga saaro astaanta Dock-ka, riix oo u jiido desktop-ka illaa erayga tirtir uu ka muuqdo. Si kastaba ha noqotee, waxa aanan ogeyn waxay ahayd sida looga saaro astaamaha baarka sare ee Finder-ka. Dhamaan isticmaaleyaasha weydiiya su'aashan, jawaabtu waa mid aad u fudud. Waxa ugu horreeya ee ay tahay inaan sameyno waa inaan aragno haddii Nidaamka Xulashada uu jiro qayb loogu talagalay aaladdaas ama utility-ka oo astaantoodu ka muuqato baarka sare iyo haddii ay sidaas tahay, gal oo hubi haddii ay jirto ikhtiyaari ah in laga saaro astaanta. Xaqiiqdii, sida asxaabteena Jordi noo sheegay, Haddii aan galno Nidaamka Xulashada iyo Siri, waxaan arki doonnaa inay na siineyso ikhtiyaarka aan ku saari karno astaanta, laakiin codsiyada kale waxay ku jirtaa menu-ka hoos-u-dhaca laftiisa oo ka muuqda astaamaha menu-ka laftiisa halkaasoo aan ka qarin karno bar-ka menu-ka.
Marka la soo koobo, ma jiro nidaam caadi ah oo had iyo jeer loo raaco si loo qariyo astaamaha ku yaal barta miiska iyo taasi waa in horumariye kasta uu barnaamijkiisa u adeegsado qaab ka duwan. Waqtiga iyo waayo-aragnimada oo laga gudbo waxaad la qabsan doontaa inaad raadiso sidaad ugu qarin lahayd hal dhinac ama qaab kale.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Mac OS X » macOS Sierra » Sida looga saaro astaamaha bar menu menu
Waad salaaman tihiin. Dhibaato ayaan qabaa tan iyo markii aan u cusbooneysiiyay barnaamijkeyga macbook-ga Sierra. Astaanta dalabka ayaa ku hadhay baarka sare markaan koorsada dul dhigo, wareegga qaansoroobaadku wuu soo muuqdaa umana oggolaanayo inaan wax kale sameeyo. Ma ogaan laheyd qaab kasta oo aad ku baabiin karto?
Tani waa sida Apple isu beddelay 5 sano gudahood Tim Cook oo hoggaanka haya